बुटवल घुम्न लगेर यसरी गरे युवकले प्रेमिकाको हत्या ! – BRTNepal
बुटवल घुम्न लगेर यसरी गरे युवकले प्रेमिकाको हत्या !
बिआरटीनेपाल २०७३ माघ २४ गते २०:३८ मा प्रकाशित
तीन वर्षदेखिको प्रेममा धोका दिएको भन्दै एक युवकले मध्यरातमा बुटवलको होटेलमा एसिड प्रहार गरी युवतीको हत्या गरेका छन्। धादिङ नौबिसेका २८ वर्षीय सुनील कोइरालाले नवलपरासी गैँडाकोट नगरपालिका–५ निवासी २७ वर्षीया तुलसा सापकोटालाई एसिड प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्।
होटलमा श्रीमान-श्रीमती भनेर उनीहरुले ढाँटेका रहेछन्। नवलपरासी गैँडाकोटकी केटीको नाम तुलसा सापकोटा रहेछ, धादिङ नौबिसेको केटाको नाम सुनील कोइराला रहेछ। तर, केटाले पनि केटीकै थरमा नाम लेखाएको रहेछ। राति एसिड आक्रमण भएपछि पल्लो कोठामा सुतेकी सानीमा भन्ने महिलालाई पनि उठाइएको थियो। तिम्रो ज्वाइँले छोरीलाई घाइते बनायो भन्दा महिला चिच्याएर भन्दै थिइन्, ‘यो मेरो ज्वाइँस्वाइँ केही होइन।’ होटलमा प्रवेश गरेपछि केटा बाहिर गएको देखिएन त्यसैले उसले योजना बनाएर एसिड बोकेर आएको थियो जस्तो लाग्छ। उसले आक्रमण सुरु गरेपछि केहीबेर केटीले प्रतिकार गरेको अनुमान छ। किनकि कोठामा सामानहरु यत्रतत्र छरिएका छन्। टेलिभिजन भुइँमा खसेर फुटेको छ। तर, ठ्याक्कै के भएको थियो भन्ने प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्दै जाला। यो समाचार हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ। जसलाई बुटवलबाट पत्रकार विष्णु घिमिरेले लेखेका छन्।